Mumwe muzvinashawo mukuru anotengesa ayo Apple share | IPhone nhau
Mavhiki mashoma apfuura uye maawa mashoma mushure mekuratidzwa kwemhedzisiro yezvemari yekambani yeCupertino-based kune yechipiri fisheni yegore regore, mumwe wevanonyanya kukosha makambani. Carl Icahn akatengesa zvese zvikamu zvaaive nazvo mukambani achivimbisa kuti Apple yakanga yakatarisana nematambudziko makuru muAsia kondinendi, matambudziko aive asati agadziriswa, uye izvo zvakamanikidza CEO weApple kuenda kuChina kupera kwemwedzi uno kunosangana nevatungamiriri vepamusoro vehurumende yeChinese.
Kunetsekana nezve iyo kambani uye yayo yenguva refu ramangwana iri kukonzera vamwe vatengesi vakuru varikufungazve nzvimbo dzavo mukambani. Wokupedzisira kuita kudaro ndiDavid Tepper, muridzi wemari dzinoverengeka dzekudyara, uyo anoti akatengesa zvikamu zvese zvaaive nazvo mukambani. Sekureva kwechinyorwa cheBusiness Insider UK, David Tepper akabvisa zvigaro zvake zvese mukambani. Tepper aive nemamiriyoni 1,26 emasheya eApple aine huwandu hunofungidzirwa hwemadhora mazana matatu nemakumi matatu nematatu.
Nekudaro, kudonha kuchangobva kuitika mukukosha kwemasheya eApple, pamwe nekudonha kuchangobva kuitika mukutengesa kwekambani kwakaita kuti Tepper atengese nzvimbo dzayo dzese. Kekupedzisira nguva iyo mari yekambani yakadonha yaive muna 2003. Kunze kwematambudziko ari kusangana neApple mushure mekuvharwa kweTunes Mafirimu uye iBooks Chitoro Pasina chikonzero chiri pachena kunze kwekudzorwa kwenyika, zvinomiririra kudzikira kukuru mune remangwana mari yaitarisirwa nekambani munyika. Tepper anoita kunge ari kuisa pfungwa dzake kuFacebook neBank yeAmerica, ayo akatenga mamirioni akati wandei mumasvondo apfuura mushure mekutengesa migove yekambani.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Mumwe muzvinashawo muhombe anotengesa ake Apple share